मैले तिमीलाई कसरी भुल्यौँ………………………… | Sabaiko Online
Home समाचार मैले तिमीलाई कसरी भुल्यौँ…………………………
मैले तिमीलाई कसरी भुल्यौँ…………………………
जिन्दागीमा तिम्रो अभाव कहिल्यै भएन । साथमा तिमी थिएनौ तर, तिम्रो यादले कहिल्यै साथ छोडेन । सायद तिम्री जस्तै निष्ठुरी याद भएको भए म कसरी बाँच्थे होला यो म कल्पना पनि गर्ने सक्दिन ।
जानु जुन दिन तिम्रो र मेरो भेट भो त्यो दिन मेरो जिवनको सबै भन्दा महत्वपूर्ण दिन थियो । तिमी सँग भेट भएको दिन देखी मैले कहिल्यै आफुलाई एक्लो ठानिन् । तिमी साथमा नभएपनि तिम्रो यादले कहिल्यै साथ छोडेन । घडीको सुई जति जति लम्किरहँन्थ्यो, सुर्यको किरण विस्तारै मधुरो हुन्र्थो त्येतिबेला तिम्रो यादले घोचिरहन्थ्र्यो । मैले दिनहरु त जसोतसो विताउँथे तर, तिम्रो यादमा रातहरु क्टाउन मलाइृ फलामका चिउरा चबाउनु सरह हुन्थ्र्यो । तिम्रो यादमा म कयौ रात चिच्याए बिताएको छु । तिमीलाई सम्झिएर रातमा बर्वराएको छु । तिम्रो यादलाई भुल्न कयौ रातहरु मैले भट्टिमा बिताएको छु । कहिले रक्सीको गिलास सँगै तिम्रो याद भुलाएको छु । कहिले चुरोटको धुवाँ सँगै तिम्रो यादलाई मिलाएको छु । अव त यस्तो लाग्न थाल्यो तिमीलाई भुल्न यो संसार छोड्नुु पर्छ होला । तिमीलाई बिर्सन स्मरण शक्ति गुमाउनु पर्छ होला । मलाई तिमीले छोडेर गएकोमा यति चिन्ता छैन । बस् यत्ति चिन्ता छ । तिम्रो यादलाई कसरी भुल्यौ ।
तिम्रो यादमा म कयौ रात चिच्याए बिताएको छु । तिमीलाई सम्झिएर रातमा बर्वराएको छु । तिम्रो यादलाई भुल्न कयौ रातहरु मैले भट्टिमा बिताएको छु । कहिले रक्सीको गिलास सँगै तिम्रो याद भुलाएको छु । कहिले चुरोटको धुवाँ सँगै तिम्रो यादलाई मिलाएको छु ।
जानु ! तिमीलाई मेरोे याद आउँछ आउँदैन मलाई थाहा छैन । तर, तिम्रो याद दिनमा सयौ र रातमा हजारौ गुणले बढ्दै गएको छ । दिनप्रति दिन तिम्रो यादले मलाई सताईरहेको छ । तर, मलाई जति तिम्रो यादले सताएको छ । त्यति तिमीलाई मेरो यादले नसतायोस् । म कामना गर्छु । कसैको यादमा बाँच्न कति गाह्रो हुँदो रैछ । मैले आज बुझेको छु । हिजो अस्ती पानी विनाको माछा छट्पटिरहेको देख्दा रमाईलो लाग्थ्यो । कोईली चरी बनमा कराउँदा आनन्द आउँथ्यो । विगान्त कथा सुन्दा र पढ्दा नाटक लाग्थ्यो । तर आज तिम्रो यादमा लेखेका कथा, कविता गजल र गितहरुले मेरो कोठा बागमती नदिको किनार जस्तै भएको छ । खाली बोत्तल र सिसिहरुले कबड्किो सामान राख्ने थलो भएको छ । चुरोट र खरानीले धुलोले आर्यघाट जस्तो भएको छ ।
जानु ! तिमीले यो पत्र अवश्य पढ्नु । र मायामा कति पिडा हुन्छ बुझ्ने प्रयास गर्नु । हुन त हिजो मलाई यस्तो विगान्त पत्र पढ्दा नाटक लाग्थ्यो । तर, तिमीले यसलाई नाटक नसोच्नु यो मेरो यार्थता र वास्तविक पीडा हो । मैले तिमी विनाको जिन्दागी यति पीडादायी होला भनेर सोचेको पनि थिईन । आज मैले बल्ल बुझ्दै छु माया के हो ? पीडा के हो भनेर ।
तिमीलाई मैले कति माया गर्थे त्यो तिमीलाई राम्रो सँग थाहा थियो । तिमी विना एक पल पनि बाँच्न नसक्ने मान्छे आज कसरी बाँचेको होला तिमी कल्पना पनि गर्ने सक्दिनौ । सायद तिमीलाई मेरो नाम सुन्दा पनि रिस उठ्छ होला । तर मलाई तिम्रो नाम सँग कसैको नाम सँग मिल्यो भने पनि तिमी भएको आभाष हुन्छ । म तिमिलाई सधै खुशी देख्न चाहान्छु । तिम्रो ओठ सँधै मुस्कुराएको हेर्न चाहान्छु । तिम्रो जिवन साथीलाई सधै राम्रो भएको हेर्न चाहान्छु । तिम्रो बाबु नानीको दिर्घयुको कामना गर्ने चाहान्छु । तिम्रो सधै रंगिन दुनियाँ होस् म भगवान् सँग प्राथना गर्छु । तिम्रो सँधै जय होस् म यहि हेर्न चाहान्छु ।
तिमीलाई मैले कति माया गर्थे त्यो तिमीलाई राम्रो सँग थाहा थियो । तिमी विना एक पल पनि बाँच्न नसक्ने मान्छे आज कसरी बाँचेको होला तिमी कल्पना पनि गर्ने सक्दिनौ ।
जानु ! विगतमा तिमीलाई माया गर्ने क्रममा मवाट धेरै गल्ती भएको होला । मैले तिम्रो भावना बुझ्न सकिन होला । कुनै दिन तिम्रो मन दुखाएको हुन सक्छु । तिमीले भनेको बाटो भन्दा विपरित बाटो हिँडेको हुन सक्छु । मलाई माफ गरिदेउ । मिल्छ भने एक पटक भेट भएर माफि माग्ने वातावरण मिलाईदिए म यो दिलवाट तिम्रो नाम सदाका लागि हटाईदिने थिए । गल्ती भए माफ पाउँ
उही तिमीलाई सधै माया गर्ने तिम्रो यादमा पागल हुने प्रेमी